Dukumeentiyada loo baahan yahay
St. Kitts iyo Nevis 60 maalmood oo la dedejiyey
Muwaadinnimada St. Kitts iyo Nevis - Maalgashiga dhismaha guryaha, hal codsade
Canshuurta waxaa ku jira.
Ku darista sheygaaga gaarigaaga
CAYMISKA SAACADAHA HALISTA - CITIZENSHIP ST. KITTS IYO NEVIS
Codsadayaasha waxay uqalmi karaan dhalashada iyadoo loo maalgashanaayo mashruuc dhisme oo horey loo ansaxiyay, oo ay kujirto saamiyo huteel, guryo, iyo unugyo guryaha is-kaashatada ah. Maalgashiga ugu yar ee sharcigu u baahan yahay waa $ 200,000 US (dib loo soo celin karo 7 sano kadib) or $ 400,000 US (dib loo soo celin karo 5 sano kadib) codsade kasta oo weyn.
Marka la soo gudbiyo arjiga, ku celinta dadaalka aan la soo celin karin iyo khidmadaha socodsiinta waa in sidoo kale la bixiyaa. Ujrooyinkaani waxay gaarayaan US $ 7,500 codsadaha ugu weyn, iyo US $ 4,000 ku tiirsan kasta oo ka mid ah codsadaha ugu weyn ee ka weyn da'da 16 sano.
Ansixinta mabda'a dalab lagu sameeyay maalgashiga guryaha, waxaa la bixiyaa khidmad dowladeed sida soo socota:
Codsade ugu weyn: US $ 35,050
Xaaska codsadaha ugu weyn: US $ 20,050
Ku tiirsanaan kasta oo kale oo u qalma codsadaha guud iyada oo aan loo eegin da'da: US $ 10,050
Ka sakow ajuuradahan, iibsadayaasha guryaha waa inay la socdaan qiimaha iibsashada (inta badan tabarucaadka qasnada ceymiska khasabka ah iyo khidmadaha gudbinta).
Ku Noqo Muwaadinimada St. Kitts iyo Nevis
Dhalashada Saint Kitts iyo Nevis xiriiriyeyaasha deg deg ah:
2021, Dhalashada Saint Kitts iyo Nevis Kana sheekayso